မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနားသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကပေးပို့သောအိတ်ဖွင့်ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cover Faces » မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနားသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကပေးပို့သောအိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Posted by mike tee on Aug 2, 2012 in Cover Faces, Creative Writing, Islam, Myanmar Gazette, News | 43 comments
ရခိုင်ပြည်နယ်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲအရေးအခင်းဟာ စနစ်တကျစီစဉ်ပြီးဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်၊ လူတစ်ချိုပြောသလို့ အရင်က
ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။အရင်ကတည်းကရှိတဲ့အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့တက်တုန်းမှာRNDPရခိုင်ပါတီကရခိုင်မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အပျောက်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်၊
ဒုသမ္မတပြောသွားသလို့ဒါ ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ ကျောက်နီမော်ကိစ္စကစတယ်
သတ်ခြဲ့ကတာပါ၊လူရမ်းကားတွေထင်နေသလို့မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတောင်းတာလဲမရှိခဲ့ပါဘူး RNDP ကအေးမောင်တို့ခွဲထွက်ရေးကြိုးပမ်းမူတွင်ပင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေမပါဝင်ခဲ့ပါ၊
၄င်းတို့သီးခြားနိုင်ငံထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းသော tape ခွေကိုကြည့်ပါ။
စတင်မုဒိန်းကျင့်သူဟာရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပါ၊(အဖြစ်မှန်ပေါ်မှာစိုးလို့တရားခံထက်ထက် ကိုထောင်ထဲမှာသတ်ပစ်လိုက်တာပါ)ရခိုင်ကမုဒိန်းကျင့်ပြီးမွတ်ဆလင်ရွာနားသွားထားပြီးစ တင်ခဲ့တာ၊ဒါဟာလူမျိုးရေးအဓိကရုန်းတွေလုပ်ခါနီးတိုင်းလုပ်နေကျကိစ္စပါ၊ဘုန်းကြီးရိုက်တယ်၊ မုဒိန်းကျင့်တယ်၊ဒီကိစ္စဖြစ်အောင်စီစဉ်ပြီးလူနည်းစုတွေကို မောင်းထုတ်ဖိုလုပ်တာပါ။ပြဿ နာဖြစ်အောင်လုပ်တာပါ။ဒါကိုတရားဥပဒေအရအရေးယူလိုက်ရင်ချက်ချင်းပြီးသွားမယ်ကိစ္စပါ။အခုထိ ပြဿနာစတဲ့တောင်ကုတ်က နေခင်းကြောင်တောင်လူသတ်မှုကိုအရေးမယူဘဲမီးမွေး ထားတုန်းပါဘဲ၊ဒါကိုသမ္မတကြီးမသိတာလား၊ ကြောက်တာလားမသိပါဘူး၊အစီရင်ခံတာကိုလနဲ့ချီပြီးကြာ အောင်လုပ်ပြီးအခုထိဘာမှအရေးမယုပါဘူး၊ပြဿနာအစမှာဘာမှအရေးမယူဘဲ တရားခံတွေကိုထွက်ပြေးခွင့်ပေးလိုက်တော့ဟိုမြို့သွားပြီးမီးရှို့၊ဒီမြို့ကိုစာဝေ၊၊ထမိန်ထုတ်ပို့၊
ဖြစ်ရင်ဘယ်ကစစ ဖြစ်ဖြစ်အရေးယူမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြသနာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး၊ဥပဒေမှာကျောသားရင်သားမခွဲခြားပါဘူး၊ဒါကို ကျောသားရင်သားခွဲခြားနေမယ်ဆိုရင် မြန်မာဟာကမ္ဘအလယ်မှာဘယ်တော့မှစံချိန်မီမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ဒါကိုလူသားတိုင်း၊အုပ်ချုပ်သူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်၊ ပြီးတောဒါရိုဟင်ဂျာအရေးအခင်းလို့ ထိုးချနေရအောင် ။ရခိုင်မှာကားပေါ်ဆွဲချသတ်တာမှာရိုဟင်ဂျာတစ်ယောက်မှမပါပါဘူး၊ အားလုံး ဗမာပြည်သား ၊တောင်ငူနဲ့၊မြောင်းမြက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပါဘဲ၊ဒါကိုအရေးမယူဘူးလွတ်ထားတယ်
လုံးဝိုင်းကြည့်ပြီးတစ်ယောက်မှမဖမ်းဘူး၊လွတ်ထားလိုက်ပါတယ်၊ဒါပြဿနာရဲ့အစပါ၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံပိုင် အသံလွင်ဌာက လူမျိုးရေး စော်ကားပြီးအသံလွင်တယ်၊လူတွေမကျေနပ်
မှူတွေတိုးပွါးလာအောင် လုပ်ပေးပြီးရခိုင်အရေးအခင်းကို စတင်လိုက်တာပါ
ဘဲ၊ တောင်ကုတ်လူသတ်သမားတွေ မောင်းတော၊ကို လှေနဲ့ထွက်ပြေးတယ်၊ပြီးတော့ဟိုမှာ
ပြဿနာရှာတယ်၊ဒါနဲ့ဇတ်လမ်းစတင်ခဲ့တာပါဘဲ၊ဒီလိုနေခင်းကြောင်းတောင်ဘာမှရန်ငြိုးမရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုရက်ရက်စက်စက်လှည်လှီး၊နားရွက်ဖြတ်၊လက်ဖြတ်၊မျက်စိထုတ်၊လုပ်နေတာကို ယနေ့ထိအရေးမယူဘဲ ဘာသာရေးဖိနှိပ်ထားတာကိုကြည့်ကြပါအုံး၊ ယခုဆိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုသူတို့မြို့မဖြတ်ရတဲ့၊လမ်းဆုံလမ်းခွမှာနေတဲ့ လူမိုက်တွေကို ရခိုင်အစိုးရကမွေးထားတာကိုကြည့်ကြပါတော့၊ လွတ်တော်မှာဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်က ၊ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် က ၊ပြောသလို့ဘဲ ဘယ်ရွာကို ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင် မီးရှိမယ်သတင်းကြားတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ကိုတင်ပြတယ် ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ပြီးတော့ပြဿနာဆက်ကြီးလာတယ် ၊ဒါဟာရခိုင်မှဖြစ်နေတဲ့အခြေ
အနေတွေထဲကတစ်ခုပါဘဲ၊RNDPကလူတွေမွတ်ဆလင်ဦးထုတ်တွေဝယ်တယ်၊သင်္ဃန်းတွေ ၀ယ်တယ်၊ဒါကို အသိပေးတယ် ၊ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ဒါ ဥပဒေပါလား မေးပေးပါ။ ရခိုင်မှအဓိကဖြစ်တဲ့အရေးအခင်းရဲ့အဓီကက ဒေါ်စု့ပြောသလို့ တရားပဒေ မရှိ လို့ဖြစ်တာပါ။ဒါအမှန်ပါဘဲ၊တရားဥပဒေကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဆိုရင်အရေးယူမယ်၊ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေဆိုအရေးမယူဘူး။ဒါကစပြီး အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ရခိုင်မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဆိုရင် မောင်းထုတ်မယ်၊ငါတို့လုပ်ရင်နိုင်ငံတော်က အရေးမယူဘူး။ဒါကြောင့် လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်ကစတင်ခဲ့တာပါဘဲ၊အဓိ
ကတရားခံကတရားဥပဒေကိုလျှင်လျှူရှုခဲ့တာကစခဲ့တာပါ၊RNDPကကောင်တွေ၊သဿနာနုဂ္ဂဟကကောင်တွေ၊ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂကအဖွဲ့သားတွေဟာရခိုင်ရွာဖက်သွားပြီးမွတ်ဆလင် ဟန်ဆောင်မီးရှိမွတ်ဆလင်ရွာဖက်ပြန်ပြေးလာဟန်ပြ ၊ပညာမတတ်တဲ့ ရခိုင်ရွာသားတွေဒေါသထွက်ပြီးမွတ်ဆလင်ရွာတွေမီးရှိ ရေကန်တွေကိုမူဆလင်အယောင် ဆောင်ပြီးဆေးခပ် ဒေါသထွက်အောင်ရခိုင်ရွာတွေကိုလုပ်၊စစ်တွေမှာဆို မွတ်ဆလင်ဈေးတွေမီးရှိ မြို့ပြင်မောင်းထုတ် ပြီး ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်ထားတာ၊ရခိုင်အစိုး
ရကကြည့်နေတာ၊ စားနပ်ရိက္ခာသွားပေးတဲ့သူဆိုမ၀င်ရ၊ လှူချင်တဲ့သူဆိုမသွားရ လှုံခြုံရေးစိတ်မချရအကြောင်းပြလုပ်ဇာတ်ခင်းနေတာ၊ဒုက္ခသည်စခန်းကိုတခြားကလာကြည့်တော့မယ်၊အလှူရှင်တွေလာမယ်ဆိုမှသူတို့ရှိနေတုန်းမှာမှကားတွေဝင်ထွက်ပြီးအပို့ပြ
စခန်းတွေမှာ၊ရွာတွေမှာတကယ့်ငရဲခန်းပါ၊ပိတ်(၄)ပိတ်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတာ၊မူဆလင်တွေစား စရာသွားဝယ်ရင်မရောင်းရဘူ၊ဆန်မကြိတ်ရဘူးလုပ်နေတာလဲ အေးမောင်ဆို့တဲ့ RNDP ကပါဘဲ့၊ဒါတောင်သူ့ကို၇ာထူးပေးထားသေးတယ်ဘာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခသည်များကူညီရေး ခေါင်ဆောင်ဆိုလားဘဲ ။သူခိုးခေါင်းဆောင်တင်ထားသလို့ပါဘဲ၊ရခိုင်ပြည်နယ်ကကိစ္စဟာ
တွေအကြမ်းဖက်တာတဲ့ သေတဲ့သူ ဘယ်သူများလဲ အယောက်(၂၀၀) ကျော်တယ်ပါတယ်
အိမ်တွေကနှင်ထုတ်ခံရတယ်၊ သူတို့လုပ်တယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနှင်ထုတ်ခံရမှာပေါ့၊
အေးဆေးဆေးနေခဲ့ကြတာဘဲ၊အရင်အစိုးရလက်ထက်ပြသနာမဖြစ်ပါလား၊မဆလလက်ထက်လဲမဖြစ်ပါလား၊အခုရခိုင်အစိုးရလက်ထက်မှပြဿနာဖြစ်တာ၊ ပြီးတော့ဒီလူတွေစာရင်းနဲက ကွာနေတာကအရင်ကစာရင်းကောက်ရင်အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုထည့်မကောက်ဘူး၊လူနည်းစုဘဲရှိသလို့စာရင်းပြထားတာပါ၊ပေါ်လဆီပါ၊အခုဖြစ်တော့မှလူတွေဘဲများနေသလို့ခိုးဝင်သလို့လျှောက်ပြောနေတာပါမိုးပေါ်ကကျလာတာမဟုတ်ပါဘူး၊ဒီနိုင်ငံမှာမွေး၊ဒီနိုင်ငံမှကြီးလာတာ
ကလေးမွေးဖွါးခွင့်တွေကအစထိမ်းချုပ်ထားတာ၊မကျန်းမာရင်လဲဆေးမကုရဘူး၊ပညာမသင်ရဘူးအပြင်းအထန်ပိတ်ထား တယ်အစကတည်းကအစ္စလာမ်ဆို မှတ်ပုံတင်ထုတ်မပေးဘူး ၊ဒါပေါ်လဆီနဲ့ထိမ်းတာတာ၊ဘာကဒ်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး၊မဲ ပေးတုံးကကဒ်အဖြူတွေဘဲရှိလိမ့်မယ်၊ ။အခုလုံထိမ်းတပ်တွေနောက်မှာရခိုင်တွေ ညဖက်ဆို မွတ်ဆလင်ရွာတွေဝင်မီးရှို့
တာလူသတ်ပစ္စည်းလုလုပ်နေတယ်၊ နေခင်းဖက်ဆိုမီဒီယာမှပါမှစိုးလို့အစတုန်းကလည်းဒီလို့ဘဲလုပ်တာပါဘဲ၊ဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်ကFb ထဲမှာဒီတစ်ခေါက်စစ်ဆင်ရေးလောက်ပျော်စရာ
အဓိက တရားခံဟာ ရခိုင်မှဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတဲ့ဥပဒေပါ
ဒေါ်စု့ပြောတာထပ်ပြောပါမယ် ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိ တာရခိုင်အရေးအခင်းတရားခံပါဘဲ
ဒီတရားခံကို ထ်ိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့ပြောပေးပါ။ ဘယ်သူက ဗုဒ္ဒ္ဓဘာသာဝင်
တွေဆို အရေးမယူတာလဲ၊ သွားတိုင်တာတောင် ဘာမှမလုပ်ခိုင်းတာ ကာကွယ်ပမေးတာ
(၁) ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ အယောင်ပြရိက္ခာလာပေးပါသည်။
ယခင်မရ ကြပါ၊ ငတ်ပြတ်နေကြပါသည်။သွားဝယ်ရင်လဲ မရောင်းပါ၊
ယခင်မြို့ထဲသို့ မ၀င်ရပါ၊ စစ်တွေမှာမြို့ထဲကတွတ်ဆလင်နေရာတွေကနှင်ထုတ်
(၃) ကျောင်းတက်ခွင်ယခုဟန်ပြ ဖွင့်ထားပါသည်။
(၄)ယခုလူကြီးမင်းတို့လာလှူလျှင်လည်း လှူပြီးပြန်သွားလျှင် ပြန်သိမ်းသွားပါသည်။
(၅) ယခုမောင်းတောတွင်လူကြီးမင်း အားဗုဒ္ဒ္ဓဘာသာဒုက္ခသည်စခန်းသို့သာခေါ်သွားပါ
သည်။မောင်းတောတွင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်စခန်းသို့သွားသည်ကို MRTVတွင် မ
တွေရပါ။ မေ၇ာက်ဟုသာထင်ပါသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်(၅)ဦးနှင့်ပေးတွေ့သည့်
(၉၄ %)နှုန်းရှိသည်။တဲ့ ယခုသွားတွေ့တော့ဘာကြောင့်မတွေ့ပေးသည်ကို သတိရပါ။
၁။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို အစိုးရ အမှုထမ်းများတွင် ခန့်အပ်ခြင်းမရှိခြင်း
၂။ နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ခန့်ထားခြင်းလုံးဝမရှိပါ။
၃။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို မှတ်ပုံတင်ထုတ်မပေးခြင်း။
၄။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့ဆွေမျိုးတော်မှ
မှတ်ပုံတင်ကို ၀န်ကြီးအထိတင်ပြီး လုပ်ရပါသည်။
၅။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်ရှိအစ္စလာမ်ဘာသာများကို အခြားဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေနေထိုင်
ခွင့်မရပါ။ တစ်ရွာမှတစ်ရွာသိူ့ပင်အချိုနေရာများတွင် ညအိပ်ခွင့်မပြုပါ။
၆။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အားလူစဉ်မမှီစေရန် ပညာသင်ခွင့်မပြုပါ၊ပညာတော်သော်
လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ်များသို့သွားမတက်ရပါ၊ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း
သာ ခွင်ါပြုချက် အမခံနှစ်ယောက်ဖြင့် ပြည်နယ်အထိအဆင့်ဆင့်တင်ပြီး ခွင်ပြုချက်ဗီဇာ
၇။ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးဝါးကုသခွင့် လည်းသွားရောက်ကုသခွင့် မရကြပါ။
၈။ ယခုအခါ ဈေးကြီးအတွင်းတွင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ဈေးရောင်းချခွင့်စစ်တွေတွင်
မရရှိပါ။ယခု နှင်ထုတ်ခံနေကြရပါသည်။ နာဇီရွာ(စက်ရုံစု)မွတ်ဆလင်ဈေးလဲ
မီးရှိုလိုက်ပါပြီ ။မြို့ပြင် မောင်းထုတ်လိုက်ပါပြီ ။၄င်းတို့အရှက်မရှိသိမ်းယူထားပါသည်။
၉။ ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေ၊မောင်းတော၊ရသေတောင်တို့တွင်မွတ်ဆလင်တို့၏ ဈေးများ
အခင်းတွင် ဗလီပေါင်း၃၀မီးရှိဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါသည်။ ရှေဟောင်းနှင့်သမိုင်းဝင်ဗလီ
၁၁။ ယခုရခိုင်အရေးအခင်းတွင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် (၂၀၀) အသတ်ခံခဲ့ရပါသည်။
၁၂။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုသတ်သောသူများကိုယနေ့ထိ အရေးမယူပါ။
လူသတ်မှု သည် သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်စုံစမ်းခိုင်းသော်လည်ယနေထိအရေးမယူ
ပါ။ နောက်ဖြစ်သော ရသေ့တောင် မွတ်ဆလင်ကျေးရွာသို့လာမီးရှိသောဗုဒ္ဓ
၁၃။ ဗလီကျောင်းများကို ပြင်ဆင်ခွင့်မရရှိကြပါ။
၁၄။ ယခုရခိုင်အရေးအခင်းတွင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ စာနပ်ရိပ်က္ခာ
လုံးဝမရောက်ကြပါ။ ငတ်ပြတ်နေကြပါသည်။ သွားဝယ်ခွင့်လည်းမရကြပါ။
၁၅။ လှုဒါန်းလိုသူများကိုလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဒုက္ခသည်စခန်းသိူ့ သွားလာခွင့်
မပေးပါ။ .ယခုလူကြီးမင်းကို ပင် သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်ကြီးကျောင်းစခန်းများသိူ့
ကြပါ၊ အလှူရှင်ပေါ်မှ ရွာမှလာစုပြီးပြသောသူများဖြစ်သည်။သူတို့ကျေူးရွာများလည်း
၁၆။ လာလှူသောသူများကို သူတို့ဇတ်တိုက်ထားသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် (၅)ယောက်
နှင့်သာပေးတွေပါသည်. အားလုံးကောင်းသည်ပြောခိုင်းပါသည်။ သူတို့လွန်သည်ပြော
၁၇ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် လက်ထပ်ခွင့်ကိုပြည်နယ်အထိတင်ရပါသည်။
၂၂ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုလျှင် မနေ့တစ်နေကမှဝင်လာသလို့ဖိနှိပ်ဆက်ဆံခံရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုများကို သိရှိစေရန်တင်ပြလိုက်ရပါသည်
mike tee has written2post in this Website..
View all posts by mike tee →
မိုက်တီး… သင်ရေးသားထားသော စာများသည်တစ်ဖက်သက်ဆန်လွန်းသည်..မုဒိမ်းသမားများကို အဘယ်ကြောင့် “ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ” ဟုပြောသနည်း..ဒီမျက်နှာများက ဘယ်သူဆိုတာ အားလုံးသိပါသည်..
ဗလီများပျက်စီးသည်ကိုသာ ပြောပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ ပျက်စီးသည်ကို အဘယ်ကြောင့်မပြောသနည်း..သင်သာရဲတစ်ယောက် ဆိုပါကလူ (၃၀၀)ကျော်ထဲမှ တရားခံ ရအောင် ရှာပါ..သင်၏ အမေ နှမ များ xxxxxx ခံရ ပါက သင်မည်သို့ ခံစားရမည်နည်း.. သင်တို့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံ တွင် မြန်မာများထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ဒီထက်ပင်ပိုဆိုးမည်ဟုထင်သည်…နောက်ဆုံးပြောလိုက်မည် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်သည်.. သင်တို့မတရားသည်ဟုခံစားရလျှင် သင်တို့မနေပါနှင့် ထွက်သွားနိုင်ပါသည် မည်သူမျှ အတင်းအဓမ္မမခေါ်ထားပါ…..
မင်းတို့လီးလို့လိုလိုမှိုလိုလိုဖြစ်နေကြတာလား ပင်လယ်သေရဲ့။သူရေးတာအမှန်ချည်းဘဲ၊ငါထောက်ခံတယ် တယ် တယ်. .
အေ့ . (ဘီအီးတစ်ခွက်ကောက်မော့ ပြီတော့ဆက်ပြော၏)စကားချပ် ..
မုဒိန်းသမားထက်ထက် ကရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဘဲ သူ့အဖေလဲ ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဘဲ
မယုံရင်ကျောက်နီမော်သွားကြည့်လိုက် . . . . အေ့ စားရမဲ့သောက်ရမယ်ဘ၀မို့ရွာကကျွှေးမွေးထားတာသူအမျိုးတော်အချင်းချင်းလီးဖြစ်နေကြတာကျန်တဲ့သူဘာဆိုင်လို့တုန်းကွ၊( ဟေ့ . .သံပုရာသီးတစ်စိတ်ပေးစမ်း စားပွဲထိုးအားလှမ်းမှာသံ )
မုဒိန်းကျင့်ရင်လဲ အစ္စလာမ်ဥပဒေမှာ သေဒဏ်ပေးရတယ်။ ကိုဓဥပဒေကိုလေ့လာကြည့်။
တောင်ကုတ်လူသတ်သမား(၃၀၀)ထဲတရားခံရှာတာတမနက်ထက်ပို့မကြာဘူးငါဆီခေါ်လာခဲ့ အေ့ (လေချည်တက်သံ)မျဉ်းလုံးနဲ့တက်ကြိတ်ပေးလိုက်မယ်
ပြန်ချည်ထားလို့ ရင်ခဏကြာပေါ်တာပေါ့ကွ အေ့(ဒုန်း) (အရက်ပုလင်းဆောင့်ချသံ)
တာတောင်ပေါ်တာဘဲနေခင်းကြောင်တောင် မပေါ်ဘူဆို့ အေ့လီဖြစ်နေလို့လား
ဘာဖစ်တယ် သင်တို့ လူမျိုးများကို လူကြီးနေရာထားရအောင် ရှေးအရင်ထဲက နိုင်ငံအတွက် ဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲ… မင်းစာမတတ်တာသေချာသွားပြီကွ . တော်တော်ညံတဲ့ကောင်ဘဲသမိုင်းလဲမသိ ။ဗိုလ်ချုပ်တို့အာဇာနည်ထဲမှလဲပါတယ် နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တာမှာလဲရှိတယ်ကွ၊ မင်တို့ရခွေးဘယ်နှစ်ကောင် အာဇာနည်းထဲမှပါလို့လား? အေ့ ထမီအောက်ဘဲလက်သီးပြနေတာ အေ့( ဟေ့တပိုင်းထပ်ပေးအုံး)စကားချပ် (ဒုန်း ခုံထုသံ)
ထမီအောက်ဘဲလက်သီးပြနေတဲ့မိုးတိမ် မင်းပြောတဲ့လင့်ကချီးစားတဲ့အကောင်တွေတင်ထားတာငါလိုးမသားရဲ့ .
ချီးစားတဲ့အကောင်တွေဘဲယုံတာ၊လူတွေမယုံဘူးကွ ။ဒုန်း . .
မင်လဲအဖုတ်ကြားကမွေးတာခွေးဘဲ အေ့ (မူးနေတုံးဖေါပြီးကျယ်နေတာကွ)
Thu Wai says:buddhist ဘာသာမှာ အစွန်းရောက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လား ၊တောင်ကုတ်မှာရက်ရက်စက်စက်ဘာမှရန်ငြိုးမရှိတဲ့ဗမာပြည်သားတွေကားပေါ်ကဆွဲချ၊လက်ဖြတ်၊ဒါးနဲ့လှီး၊မျက်လုံး ထုတ်၊ခြေထောက်ဖြတ်လုပ်တာဘယ်ကောင်တွေလဲမင်းအမေလင်buddhist အစွန်းရောက်တွေဘဲကွ၊ သေသေချာချာကြည့်ပါအုံး အေ့ ပြောရမှာအော့နှလုံးနှာတယ်၊
ထေရဝါဒ ဆိုတာ ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ တရားတွေကို နဂိုမူလအတိုင်းမပြောင်းလဲပဲ
လက်ခံ ကျင့်သုံးနေတာ ထေရဝါဒပါဆိုရအောင်မင်းဘုရားစာတတ်လားမြင်ဖူးလို့လား။
ကုလားစာဖတ်တတ်လို့လား ပါဋ္ဌိ၊သက္ကတ တွေကဘင်္ဂလားပြည်က ရိုဟင်ဂျာ ကုလားစာတွေဘဲ
မမြင်မကန်းနဲ့မင်းတို့တွေ ဘီအီးနဲ့ အရက် မှန်အောင်ရွေးအုံး
မင်းချင် .နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ် မရှိတဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် သမားတွေကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာ မင်းမြင်ဖူးလို့လားကွပြောနေရအောင်၊အခုမြင်နေရတာ
ခွေးဘီလူးတွေဘဲ သူတို့နဲ့ဘယ်လို့ပတ်သက်လို့တုန်း ၊ ဘီအီးနဲ့ဂျော်နီဝတ်ကားလို့တစ်ခြားစီ
စောင့်နေတာကွ၊နစခ ဆိုတာဘဲ၊ခြံစည်းရိုးလဲခတ်ထားလိုက်တာ တန်းနေတာဘဲ၊မိုင်းတွေလဲမြုတ်ထား
တယ်ကွ ။ မင်းသွားချင်ငါပို့ပေးမယ်၊ ခွေးတောင်ဝင်လို့ရလားဆိုတာ၊
ဘာသာကြီး ၄ မျိုးကို လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဒဲ့လား၊
ကရင်ပြည်နယ် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ ရွာမီးရှို့ခံတာ၊ဘုရားကျောင်တွေအဖျက်ခံရတာ၊ဆွေကျနေတာတောင်ပြန်ပြင်ခွင့်မရတာ
မူဆလင်ဗလီတွေအဖျက်ခံရတာ၊ ရန်ကုန်မှာတောင်ခဲနဲဝိုင်ပြစ်၊ မီးနဲ့ရှို့၊တောင်တွင်ကြီး
အခုစစ်တွေမှာကြည့် အစ္စလာမ်ဈေးဆိုင်တွေကိုမီးရှို၊အိမ်နေရာ၊မြေနေရာ၊ပစ္စည်းသိမ်း၊နှစ်ရာထောင်ရှိတဲ့ဗလီတွေဖျက်ပြီးမီးရှို့တာလက်ပိုက်ကြည့်နေတာ၊မင်းအမေလင် ဘာသာကြီး(၄)ဘာသာလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်လား
စကဘဲရောက်နေတာကို မင်းကဘယ်ကခွင့်ပြုသတုံး၊ခွင့်ပြုပြုမပြုပြု သောက်နေမယ်အဲ ရှိနေဒယ်
P chogyi မှတ်ထား
Phaung Phaung မွတ်စလင်ဘာသာမှာ နွားသတ်ပြီးအစ်တာကို ကုသိုလ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလုံးဝမရှိဒဲ့လား ၀က်သတ်ပြီးကုသိုလ်လုပ်တာမရှိဘူးလား၊
ဒါပေမဲ့အသက်အနည်းဆုံးသတ်ရမယ်၊ ဒါကြောင့် အကောင်အကြီးဆုံးတိရစ္ဆာန်ရှိရင်အကောင်အကြီးဆုံးအသက်တစ်ချောင်ဘဲသတ်ရမယ်
နင်အမှူး တုန်းလား၊ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်အုံး
ရဲ့မူလဘူမိနက်သံမွေးရပ်မြေတွေဘဲ၊၊မင်တို့ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလီကုလားကြီးဗုဒ္ဓ လဲဝင်ချင်တိုင်းဝင်ထွက်ချင်တိုင်းထွက် သွားချင်သလိုသွားနေတာ(ဗီဇာမှမလိုတာ)
သူ့ကိုတောင်ကိုးကွယ်နေသေးတာဘဲ၊ သူတို့ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလီကုလားကြီးဗုဒ္ဓ ၀င်ထွက်သွားလာသလိုသူတို့နယ်မြေတွေမှာသူတို့လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနေတာနင်အခုမှသိလား
မင်းတို့မှနေချင်ထွက်သွားတာသာပို့ကောင်းတယ်၊ အေ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဟိန္ဒူဘာသာ၊နတ်ကိုးကွယ်တာဘဲ
( အေ့ မူးနေတာတောင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ)
ကျန်တဲ့နိုင်ငံကကောင်တွေမင်းတို့ နိုင်ငံပြန်ဆိုရင် ငတ်သေလိမ့်မယ်၊ဂျပန်မှမုဒိန်းကျင့်တာ
ဗမာတွေဘဲ ဒါကိုဒီမှာလို့လုပ်ရင် ဗမာတွေပြေးပေါက်မှားပြီး အားလုံးသေလိမ့်မယ်၊
ထိုင်မှာ ဗမာတွေခိုကပ်နေရတာ သိန်း(၂၅)ကျော်ရှိတယ်၊ ဘူသီးတောင်မောင်တောမှာရှိတဲ့ လူအချိုးနဲ့ဆို(၁၀)ဆလောက်များတယ်၊
မလေးမှာ ဗမာ၊ရခိုင် သိန်း(၂၀)ကျော်ရှိတယ်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျမှာ ရခိုင်ဗုဒ္ဓသိန်း(၃၀)ရှိတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာလုပ်သလို လူနည်းစုဘာသာခြား
မလေးရှားမှာလည်း ရခိုင်နှစ်ယောက်အသတ်ခံရပြီ ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေက
လက်တုန့်ြ့ပန်ရင် နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာတွေ ရခိုင်သူတောင်းစားတွေအားလုံးသေကုန်လိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားကိုယ်စားဖူးခက်ကနေ ပြောရတာမောလိုက်တာဗျာ ၊ မြန်မာဘီယာတစ်ပါကင်ဖူးခက်ပို့ဗျာ .
စကားပြောယဉ်ကျေးလိုက်တာ…မှတ်ထားဦး..”အဖေကြမ်းက လူကြမ်း၏..အမေကြမ်းက နှုတ်သရမ်း”၏…အစ္စလာမ် ကလူမျိုးခြားမယူဘူး..ဟုတ်စ…လွန်ခဲ့သော၁၉၉၅ ၀န်းကျင်လောက်ကဗိုလ်တစ်ထောင်ဗလီနားမှာ ၁၁၁ နာမည်နှင့်မိတ္တူဆိုင်ရှိပါသည်…ထိုဆိုင်ကို ဗလီမှဖြန်.ဝေစာလာကူးပါသည်…ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ “စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီးသမီးကိုရလျှင်ဆုတော်ငွေဘယ်လောက်….ဗိုလ်မှူး , ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ,ဗိုလ်မှူးကြီး အစရှိသဖြင့်ရေးထားပါသည်…ကဲ…သင်ဘာပြောမလဲ…တောင်ကုတ်အမှုကို သင်ပြောသလိုဖော်ထုတ်မည်ဆိုပါက သင်သည် “အဖေကြမ်း” မှမွေးလာသောသူဖြစ်ရမည်…ရဲဘော်ကိုထွေး၏ အလုပ်သည် သက်တော်စောင့်သာဖြစ်သည်..ယောင်ရမ်းပြီး အာဇာနည် ထဲပါသွားခြင်းဖြစ်သည်…အရည်အချင်းရှိသူမဟုတ်…ထက်ပြောပါမည်….”အဖေကြမ်းက လူကြမ်း၏..အမေကြမ်းက နှုတ်သရမ်း”၏
ကျန်တဲ့တိုင်ရင်းသားတွေအာဇာနည်ထဲပါတယ် မင်းအမေလိုး ရခွေးသူတောင်စားတစ်ယောက်မှမပါတာ
မင်းမျက်လုံးလီးဆို့ထားလား၊ မင်အမေခွေးဘီလူး၊ ခွေးဘီလူးမရက္ခမ
ယူမရာလူမရှိလို ဘင်္ဂလီ(လီး)ကိုအတင်းဆွဲယူပြီလူဖြစ်လာရတဲ့ကောင် ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလီကို ဘုရားထူး
နေ့တိုင်ဖင်ကုန်းထိုင်ရှစ်ခိုးနေရတဲ့မျိုးမစစ်သားရဲ့ ဆိုမာလီးယာပင်လယ်ဓမြတွေ ဒီအမေလိုးကိုတွေ့ရင်ရေထဲတစ်ခါထဲခုတ်ချလိုက်ကြ ၊ဗမာက ဆိုတစ်ကောင်မှအလွတ်မပေးနဲ့
face book & MD ဖတ်ကွ မဖတ်ရသေးရင်ပြန်တင်ပေးလိုက်မယ်
လှုံ့ဆော်စာ များဖြန့်ဝေသူများအားထိုစာစောင်များနှင်အတူ ဖမ်းဆီးခဲ့ ကြောင်း
ခဲပြာရောင်ဗင်ကားပေါ်မှ စာစောင်များပေးဝေသွားသော သူများ ယဉ်အမှတ် ၁ဂ/၄၁၃၉ ကားမှဖြစ်ကြောင်း။ ကားမှာလိုက်စင်မဲ့ ကားဖြစ်သည် ။ထိူနောက် ဒုရဲ့ အုပ်စိန်မင်းသန်း နှင့်အတူတပ်ကြပ်ကြီး နိင်ဝင်းဦးတို့အဖွဲ့ သည်ထိုကားနောက်သိူလိုက်ခဲ့ ရာ ည 12.00တွင် ပဒဲ ကောကျေးရွာ ဦးသန်းထွေး (ဘ)ဦးဘစံတိုအိမ်ရှေ့တွင် စာစောင်များနင့်အတူဖမ်းဆီးခဲ့ ပါတယ်။
(က)ညီမင်းခန့် (ဘ)ဦးသိန်းညွန့် ရခိုင် ဗုဒ္ဓ ၁၁/သတန(နိုင်)၀၇၃၁၀၀ (ပ)နှစ် မြန်မာစာ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် ဇီဇ၀ါလမ်း သံတွဲ့ မြို့ 
(ခ) ခိုင်ဇော်ဆန်း (ခ)ဖိုးသား (ဘ) ဦးခင်ဇော် ရခိုင်ဗုဒ္ဓ 18 နှစ် 10 တန်း အမှတ်(၃) ရပ်ကွက် ရဲ့ စခန်းဝန်းသံတွဲ
(ဂ) သန့်ဇင်ဖြိုး (ဘ) ဦးသန်းလွင် ၇ခိုင် ဗုဒ္ဓ ၁၁/ဂမန(နိုင်)၀၄၁၄၁၈ ဒုတိယနှစ် မြို့ပြ (စက်မူလက်မူ သိပံသံတွဲ ) ဂွမြို့
(ဃ) နိုင်ရဲ့ ဦး(ခ)ညီညီ (ဘ) ဦးအောင်ထွန်းကြည် ရခိုင် ဗုဒ္ဓ 21 နှစ် သမိုင်း (ပ)နှစ် စစ်တွေ ၁၁/သတန(နိုင်) ၀၈၅၀၄၄တို့အားထောင်တွင်ယခုချိန်ထိဖမ်းဆီးထားပြီး
Shwe Phyu ခေါ်တဲ့ Shwe pig
နင့်အမေကိုဝက်ထောာင်ကြီးဇီးတင်တုန်းကရောပြီးဇီးတင်လိုက်လို့ Shwe pig လေးတွေမွေးလာပြီး
မင်အမေလင်ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓ ဘဲ ဆောက်ချင်ရာဆောက်၊မင်းဖင်ကိုချချင်သလိုချလို့ရတယ်။
မင်းတို့လဲ မင်းအမေကိုဝက်လိုးလိုးခံချင်နေပုံဘဲ ၊မင်းပါ မင်းနှမတွေတစ်မျိုးလုံးခံလိုက် ရှစ်စိတ်ကွဲကုန်မယ်။
မင်းတို့လဲ မလေးကထွက်၊ ဘင်္ဂလားကထွက်၊ထိုင်းကထွက်၊ကူဝိတ်ကထွက်၊UAEထွက်၊ကာတာထွက်၊ဒူဘိုင်ကထွက်၊အားလုံးထွက်ရင် မင်အမေလင်တွေလဲ သူ့တိုင်းပြည်သူပြန်သွားလိမ့်မယ်၊ မင်းဖင်ကုန်းပေပြီးစင်တင်ထာတဲ့ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာဗုဒ္ဓလဲမမေ့စေနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်
saline tinmg သည် ချီးကြုံးကလားပါ ခွေးလွှတ်ကြပါ အတန်းပညာ ဝထကလသ
သင်ယူဆဲပါ အဖေမပေါ်ပဲမွေးခဲ့သူမို့ပါ saline tinmgရဲ့အမေက နူနေပါသော
ကြောင့် သူ့သားကို မသင်ပေးနိုင်သောကြောင့် အရိုင်းအစိုင်းဘဝ ရောက်နေခြင်းပါ
saline tinmg သင်စာသေချာဖတ်ပါ….ရောမချပါနှင့်…၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ခဲ့သော ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်သည်…ဗလီမှ မုတ်ဆိတ်ကုလားများကိုယ်တိုင် လာကူးခြင်းဖြစ်သည်…သင်သည်လောက်ဆဲဆိုနေပုံထောက်လျှင် သင်တို့ မျိုးနွယ်သည်အရိုင်းအစိုင်းမျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသောသူဖြစ်မည်…ဒါနောက်ဆုံးcomment ဖြစ်သည်…သင်နှင့်ဖက်ပြိုင်နေလျှင် သိက္ခာ ကျသည်…နောက်ဆုံးဘယ်သူမှန်/မှားပေါ်မည်…နှုတ်ဆက်ပါသည်….
Kyi Soe says:
ဗုဒ္ဓကို ဘင်္ဂါလီလို့ အပြောခံရတာ ခွေးကိုက်ခံရတာထက် နာတယ်၊ ပြောသူကို တုန့်ပြန်စရာအကြောင်းမရှိပေမယ့် ကျန်တဲ့လူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်မှာ စိုးလို့ ပြောပါရစေ၊ ဗုဒ္ဓဟာ ဘင်္ဂါလီနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာသမိုင်း၊ အသောကမင်းကြီးကျောက်စာ အပါအ၀င်အိန္ဒိယသမိုင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်တွေနဲ့သမိုင်းတွေမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓမပွင့်မီအချိန်ကတည်းက ဇာတ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးကြတယ်၊ အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လူတန်းစားလေးမျိုးရှိတယ်၊(၁) ခတ္တိယခေါ်တဲ့ မင်းမျိုး၊ (၂) ဗြဟ္မဏခေါ်တဲ့ ပုဏ္ဏားမျိုး (သို့) ပညာရှင်လူတန်းစား (၃) ဝေဿ ခေါ်တဲ့ ကုန်သည် (သို့) သူကြွယ်မျိုးနဲ့ သုဒ္ဓခေါ်တဲ့ သူဆင်းရဲ အောက်တန်းစားလူမျိုးတို့ ဖြစ်တယ်၊ ဗုဒ္ဓဟာ ခတ္တိယခေါ်တဲ့ မင်းမျိုးဖြစ်တယ်၊ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ဘယ်အတန်းအစားထဲ ပါမလဲ စဉ်းစားကြည့်နိုင်တယ်၊ အိန္ဒိယသမိုင်းအရ ဗုဒ္ဓရဲ့ အမျိုးအနွယ်တွေဟာ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းက ၀င်ရောက်အခြေချလာတဲ့ လူမျိုးစုဖြစ်တဲ့အတွက် အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ အထက်တန်းစားမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ အာရိယန်တွေနဲ့တောင် သွေးနှောမှာကို စိုးရိမ်တဲ့ အတွက် စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓရဲ့အမျိုးအနွယ်ကို သကျသာကီမျိုးနွယ်လို့လဲ ခေါ်တယ်၊ သကျသာကီဆိုတာ အမျိုးအနွယ်ကို သွေးမနှောအောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက် ပါဠိလို သက္က လို့ ခေါ်ရာကနေ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခေါ်ဖြစ်တယ်၊သာကီမျိုးနွယ်အကြွင်းအကျန်တချို့ နီပေါနိုင်ငံမှာ အခုထိရှိနေသေးတယ်၊ သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ဟာ အိန္ဒိယမျိုးနွယ်တွေနဲ့ တခြားစီဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂါလီဆိုတာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘင်ဂေါပြည်နယ်သားတွေရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်၊ အိန္ဒိယမှာ အနောက်ဘင်္ဂေါပြည်နယ်ရှိနေသေးပြီး ခွဲထွက်ဘင်္ဂေါကတော့ အခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပေါ့၊ ဗုဒ္ဓခေတ်က ဘင်္ဂေါဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တိုင်းကြီး (၁၆)တိုင်းမှာ သက္ကတလို ဗင်္ဂတိုင်း၊ မြန်မာအသံနဲ့ဆို ၀င်္ဂတိုင်းလို့ ရေးကြတယ်၊ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာသူတွေနေထိုင်ရာ အရပ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ဘင်္ဂေါတိုင်းသား ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓနဲ့ လားလားမျှမဆိုင် ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်။
အော် ပင်လယ်ပျော်ရယ် ပင်လယ်ထဲသာ သွားပျော်လိုက်ပါတော့။ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့သူကို မောင်းထုတ်ရသလားဗျာ။ ခင်ဗျားရော မြန်မာနိုင်ငံ
မှာ နေရတာကို တရားတယ်လို့ခံစားရပါသလား။ မခံစားရလျှင်….
အော်…ပြောဖို့ ကျန်သွားတယ်…သင်တို့ လူမျိုးများကို လူကြီးနေရာထားရအောင် ရှေးအရင်ထဲက နိုင်ငံအတွက် ဘာလုပ်ပေးခဲ့လဲ…
သင်တို့ဒီနိုင်ငံကိုဝင်လာတုန်းက မည်သည့်ပုံစံမျိုး မည်သည့်အလုပ်မျိုးလုပ်ပြီး ၀င်လာသလဲ..ရှက်ဖို့ ကောင်းပါ၏…
သူ့ကျမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် (၂၀၀) အသတ်ခံရတယ်လို့
ရှက်ကြောပြတ် .. အဟွတ် အဟွတ်
Post writer is makingafalse story in reverse way with in-consistencies.
He maybe extremist. One question to him is “have U been to Rakhine state? I think you are Rangoon muslim.”.
http://islamvirus.blogspot.com/?zx=a64274cb5d4aba61 သိချင်ရင် သွားကြည့်
စောက်ခွေးကုလားတွေက ဒီလိုပါပဲကွာ။ အဲဒီလင့်တွေကော ဖတ်တတ်ပါ့မလားမသိ။
တစ်ကယ်ခံရမှ အော်မနေပါနဲ့တော့။အခုတော့ ငါတို့ကိုအစွန်းရောက်အဖြစ်မြင်ချင်မြင်ပါ။
အဲဒီအချိန်ကျမှ လည်လှီးသာခံလိုက်တော့။ငါတို့တွေးထားတာထက် ဒီကောင်တွေက
ပိုမိုက်ရိုင်း ရက်စက် ယုတ်မာတယ်ဆိုတာမြဲမြဲမှတ်။
အော် စကားမစပ် မိုက်တီးဆိုတဲ့ကောင် fb acc & g mail acc လေးမစပါလား???????
ရော့ ဒါလေးပါထပ်ဖတ်ကြည့် http://islamsucks.wordpress.com/
“ကလေးမွေးဖွါးခွင့်တွေကအစထိမ်းချုပ်ထားတာ” တဲ့လား တော်သေးတာပေါ့ ထိမ်းချုပ်ထားလို့သာ
ဒါပေမဲ့ မင်းတို့တွေဟာ ချက်ကြောနဲ့ရှက်ကြော
ဘာမှန်းသိကြမှာ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းတို့ ရဖို့ဆိုရင်
စုပ်ရမလား စုပ်မယ်၊လျက်ရမလား လျက်မယ်၊
သွားစေရမယ်၊မင်းတို့ ဘင်ဂါလိ ကုလားယုတ်တွေ
ရုပ်ရှင်သာရိုက်စားကြရင် ဟောလိဝုတ် စတားတွေ
Share from above link.
All Myanmar People, To Protect our country from Bangali !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
မိုက်တီး ဆိုတဲ့ကောင် မင်းတော့မီးတိုက်ခံရတော့မယ်
buddhist ဘာသာမှာ အစွန်းရောက်ဆိုတာမရှိဘူးကွ
လက်ခံ ကျင့်သုံးနေတာ ထေရဝါဒပါ
မင်းဦးဏှောက်နဲ့ မှီမလားတော့မသိဘူး အကြီးကြီးတွေရှင်းပြလိုက်ရင်တော့ကွာ။
ကလေးမွေးခွင့်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်.. လက်ထပ်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ် ထားတယ်တဲ့..
သြာ်.. အေးအေး မင်းပဲပြောတော့.. မင်းတို့တတွေပဲ အားတိုင်းမွေး မွေးတိုင်းအဖတ်တင် လေတိုက်တိုင်းကြီးနေကြတာ…
ယူလိုက်တဲ့မိန်းမဆိုတာလဲ ဗမာမဆိုပြီးရောအကုန်ယူတယ်… လူလုပ်တဲ့စက်ကလည်း ပျက်တယ်လို့ကိုမရှိ… လူအင်အားနဲ့ဖိပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းဖို့ကြံနေတယ်ဆိုတာ အကုန်သိတယ်… မင်းတို့ အာရဗီစာနဲ့ရေးထားတဲ့ Website တွေကိုသွားဖတ်ပြီးပြီ.. သောက်တလွဲတွေချည်းပဲ… ဆူနာမီတုံးက ရေနစ်သေထားလို့ မဲနေတဲ့ အလောင်းတွေကို အရိုက်ခံရပြီး မီးရှို့ခံရပါတယ်ဆိုပြီး တင်လိုတင်… Middle East က မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းသတ်ထားတဲ့ပုံတွေကိုလည်း ရခိုင်မှာအသတ်ခံရပါတယ်ဆိုပြီးတင်လိုတင်.. အခုပြဿနာကို ဘာသာရေးပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင် မင်းတို့ကလုပ်နေတာ.. အဓိကက နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ် မရှိတဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် သမားတွေကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာ မင်း ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်စမ်းပါ…
( အဓိကက နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ် မရှိတဲ့
မင်း ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်စမ်းပါ… )
ဟိုတုန်းက အဲ့သည်ဒေသမှာ ရှိခဲ့ကြတဲ့ လဝက ဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေကိုလည်း
ခုချိန်ထိ လူဝင်မှု့ကိစ္စတွေကို ချက်ခြင်းမလုပ်ဘဲ ယောင်ခြောက်ဆယ်
( တစ်လောကတော့ လဝက အသစ်တစ်ယောက်ပြောင်းလာတယ်လို့တော့
ကျုပ်တို့ သနားလို့ ပေးနေထားတာကို လူပါးဝတဲ့ကလားတွေမဟုတ်ဘူး
အရင်တုန်းကတော့ ကျုပ်လည်းမျှမျှတတတော့ တွေးပေးပါတယ်
ဘင်္ဂလားဒစ်က ကလားတွေကို ဘင်္ဂလားက ကလားတွေကမှ လက်မခံတော့
အနှီးဒုက္ခသည်တွေကို ထောက်ပံ့နေတာတွေကို မလုပ်ဘို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ အစိုးရ
ကိုယ်တိုင်က အမိန့်ပေးနေတဲ့ သတင်းတစ်ပုတ် တက်လာတော့
ထိပ်ပြောင်တို့အဖွဲ့ စောက်ရေးမလုပ်တာလည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်ဘဲ
လူတွေများ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူသားပါဆိုပြီးတယ်အထင်ကြီးကြတယ်
အဲ့သည်ကလားတွေနေရာမှာ ဝက်တွေ နွားတွေဖြစ်ကြည့်
နင့်ဝက် ငါ့ဝက်ဆိုပြီး ကုလားသမက်ကပါ ဝင်ရှင်းရမှာ
မသာကာ ဟိုဖက်နိုင်ငံက ဘူးပင်လေးဒီဖက်နိုင်ငံထဲ လာဝင်သီးတယ်ဆိုရင်တောင်
နင်မယူလည်း ငါယူမယ်ဆိုပြီး ခံစားလို့ရသေးတယ်
ဘူးသီးခရမ်းသီဆိုလည်း အကောင်းသား ခုဟာက ကလားတွေဖြစ်နေတယ်
( အထက်ကအကြောင်းအရာတွေကတော့ ပေါက်လွှတ်ပဲစားပြောခြင်းသာ
ယခင် လဝကများ နွားဇာတ်ခင်ထားမှု့ကြောင့် ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရ
ဖြစ်နေသော ကလားများကို လက်ရှိလဝက များမှ ကလားဇာတ်ခင်း၍ မောင်းထုတ်ခြင်း
ဒုတိယမ္ပိ ပေါက်လွှတ်ပဲစားဘာသှ် )
ကိုပုမှန်၏။ ဒီအရေးမှာ တရားခံလဝကတွေ လွတ်နေတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလည်းဆိုတာ ရေရေရာရာ မပြောဖြစ်ကြဘူး။ သတင်းထဲမှာတော့ ရဲစခန်းတွေထပ်ချဲ့မယ်တဲ့..မြင်ယောင်သေးသကွာ ကုလားကြောက်လို့ ရဲအားကိုး ရဲနဲ့ကုလား အတူတူဆိုး ဖြစ်နေအုံးမှာ…။
မှတ်ချက်။ ဘပု ခင်ဗျား ဘဝကူးမကောင်းလို့ နောင်ဘဝ နွားဖြစ်ရင် သဂျီးအစား မခံရအောင် ကျုပ်ရောက်ရာအရပ်ကနေ ခင်ဗျားကိုဝယ်ကယ်မယ်။ နွားမတထောင်လည်း ရှာထားပေးမယ်။ စိတ်ချမ်းသာစွာ နေပါလော့..။
ခေတ်အဆက်ဆက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမျာရဲ့ မျက်နှာထောက်ထားပြီး
ဘာသာကြီး ၄ မျိုးကို လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကို လူမျိူးရေးဝါးမျိုဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့နေရာမှာ ကျွန်တော်လိုလူမျိုးတွေရှိနေရင် အဲဒီလိုအခွင့်အရေး
လမ်းဘေး သစ်ပင်မှာ ရေအိုးစင်ဆောင်ပြီး ကုသိုလ်ယူချင်ယောင်ဆောင်တယ်။
နည်းနည်းကြာလာရင် ပြင်ပြီး အမိုးအကာလေးဆောက်တယ်။ နောက်ထပ် ဇရပ်လိုလို
ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ နှစ်နည်းနည်းလည်းကြာရော ပလီဖြစ်သွားရော။
ဥပမာ- သာကေတ ရန်ပြေမှတ်တိုင်နားက ကုလာရေအိုင်းစင်သွားကြည့်။
ဥပမာ- သာကေတ ရန်ပြေမှတ်တိုင်နားက ကုလာရေအိုးစင်သွားကြည့်။
ဘာသာရေးဖိနှိပ်ခံနေရတယ်တဲ့… မိမိဘာသာဟာ သိပ်ကိုမွန်မြတ်သန့်ဇင်နေရင်တော့ ဖိနှိပ်ခံရတယ်လို့
ထင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး… ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာတွေ၊ အစွန်းရောက်နေတာတွေ၊ ကုသိုလ်ရေးမှာတင်ပဲဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ် နေတာတွေ (ဥပမာ – ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဇီဝိတဒါန ကုသိုလ်ဆိုရင် … မွတ်စလင်ဘာသာမှာ နွားသတ်ပြီးအစ်တာကို ကုသိုလ်တဲ့ ) ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလုံးဝမရှိပါ…. ။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတစ်ကာလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကလေးစားချစ်ခင်လာအောင် မိမိနေနေတဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ရင်းနှီးမှုကိုရရှိအောင် မိမိဘာသာရေးရဲ့အားနည်းချက်ကိုသာ အရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပါလို့ဘဲအကြံပေးချင်ပါတယ်…။
ပင်လယ်ပျော်ရဲ့ comment ကိုလုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ သင်တို့အတွက် ဘာသာရေးဖိနှိပ်ခံ
နေရတယ်ဆိုရင် မွတ်စလင်နိုင်ငံမှာသာသွားနေကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါပြောတာပေါ့..သူခိုးလူဟစ်ဆိုတာ… ဘယ်သူက လာနေပါလို့ ခေါ်ထားလို့လဲ.. မောင်းတောက ကုလားတစ်ယောက်က မိန်းမ ၄ ယောက်ယူပြီး သားသမီး ၂၈ ယောက်မွေးထားတာကို ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ ပြောချင်တာလား… တစ်ရာလောက်များမွေးချင်နေတာလား မသိဘူး… လည်လှီးသတ်တယ်ဆိုပဲ.. တကယ်လည်လှီးတဲ့ ဓလေ့က ဘယ်သူတွေရဲ့ ဓလေ့လဲ… ခွေးနေရာမရ ဖြစ်နေတိုင်း ဘာသာရေးကို ဆွဲမထည့်နဲ့… အဲဒီလို ဖိနှိပ်နေတယ်လို့ ခံစားရရင် ချက်ချင်းထွက်သွားပါလား.. ဘယ်သူကမှ လက်မခံလို့ တွယ်ကပ်နေပြီး လာစော်ကားနေတယ်.. ကိုယ့်အကြောင်းလည်း ကိုယ်မသိကြတာလား.. သိသိကြီးနဲ့ပဲ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား မသိတော့ပါဘူး.. ကိုယ့်နိုင်ငံပြဿနာကို ကိုယ်ရှင်းတာ.. မကျေနပ်ရင် အဲဒီတတိယနိုင်ငံတွေက ခေါ်သာထားလိုက်ကြ…
ထူးခြားတဲ့အချက်ကို ရွာသူားတွေ သတိထားမိရဲ့လား ။
လက်မ အောက်စိုက် ၁၆ ခု ( မ ထူးခြား ပါ )
လက်မ အပေါ်ထောင်တာ ၆ ခု ( ဒါကမှ စဉ်းစား စရာပဲ ) ?????
Since these kalars are the sons of bitch and grandsons of the pig, they can only make this kind of story.
ဟေ့ကောင်မိုက်တီးဆိုတဲ့ သေရည်ကြိုးတစ်ပြားရေ…မင်းတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ထင်ရင် လီးမို့လို့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာနေဖို့ကြိုးစားနေလဲကွ…မင်းတို့ကိုအားကိုးနေတဲ့ ပထွေးတွေဆီကိုသွားကြပါလား…ရေမျှောကမ်းတင်တွေရဲ့….
saline tinmg ခွေးစကားပြော ဆဲတာကျ မဖျက်ဘဲ
sitminnaing ကို ဘာဖြစ်လို့ ရွေးဖျက်သလဲ စဉ်းစားမရပါ
အိတ်ဖွင့်ပေးစာရဲ့အရေးအသားက တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်..။
ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို အိုးမည်းသုတ် ခွပ်ခိုင်းပြီး ပြဿနာအာလုံး RNDP ကို လွှဲချထားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်..။
လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေရှိနေရင် ရခိုင်ပြည်ကြီး မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီး စုစည်းတောင့်တင်းမှုမရှိဘဲ အင်အားချည့်နဲ့သွားမှာပါ..။ အဲ့ဒါဆို ပုံမှန်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ မသွားနိုင်ဘဲ စစ်တပ်ကိုဘဲ
လက်ရှိအရေးအခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတွေကို ထိန်ချန်နောက်ပို့ထားပြီး အာဏာပိုင်မဟုတ်တဲ့ RNDP ကိုဘဲ ခေါင်းစဉ်တပ် လွှဲချထားတာ ထူးဆန်းနေပါတယ်…။ ဒါမှလည်း နောင်အနာဂတ်မှာ NLD နဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးများရဲ့ အဓိကပါတီ RNDP ကို ချေမှုန်းပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါ..။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကသယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ ကချင်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဆူပူမငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်နေတာဟာ တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက်လို့ ထင်ဖို့မလွယ်ပါ..။
မဝသေးလို့ပြန်လာတာ တစ်မျိုးထင်ရင် Sorry,
“ပလိ”အစ ကုလားကတဲ့၊ မှတ်ထားနော်
ပလိပလာနဲ့ ကူလိကူမာလုပ်ပြိး “ပလိ”ခိုးဆောက်
ပလိပလာ လှည့်ဖြား ၊ သနားလို့ ခေါင်းပေးဝင်
ပစ်သွင်းပေါ့ တစ်ကိုယ်လုံး ကုလားအုပ်တောင် အဖေ
ပလိပလာ မာယာသုံးလို့၊ ကျလိုက်တဲ့မျက်ရည်
မိကျောင်းတောင် မယှဉ်နိုင်၊ ကုလားဆို
ဝေါင် ဝေါင် ရှေး၊ ကြောက်ပြိတဲ့လေး…………..
ပလိတာကုလား၊ ကုလားဆို လူပလိ
Admin တို့ရေ saline tinmg ရေးထားတဲ့အထဲက ၊
ဆဲဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေ ဖျက်ပေးကြပါ ။
( eg ; လီးလို့လိုလိုမှိုလိုလိုဖြစ်နေကြတာလား ၊ မင်တို့ရခွေးဘယ်နှစ်ကောင် ၊
အောက်မှာ Complaint လုပ်နေပြီ ။
ဘယ်သူဖျက်တာလဲ ဘာကြောင့်လဲ “
ကိုယ့်အာဘော်နဲ့ ကိုယ်မဆဲဘဲ ကျုပ်အာဘော်တွေနဲ့ဆဲနေဒယ်
ရွာဇနပုဒ်သားအရိုင်းစိုင်းတွေပြောတဲ့ ( လီးလို့လိုလိုမှိုလိုလို ) ဆိုတဲ့စကားကို
ကျုပ် နာမည်အပျက်ခံပြီး အဦးဆုံး ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်
အဲ့သည်ဇဂါးပြောဒေါ့မယ်ဆို ကျုပ်ကို ခရက်ဒစ်ပေးသင့်တယ်
ဂေဇက် ဘုတ်အုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အမှတ် ( ၆ ) နှင့် အမှတ် ( ၉ ) တို့ကို
မလိုက်နာသူများကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် ဖြေရှင်း သင့်ပါဂျောင်း
” ဘုရားပေးပေးကျမ်းပေးပေး ကျုပ်မဟုတ်ဘူးနော်အဘ
Aဘေးကောင် ၊ ကိုယ့်အာဘော်နဲ့ ကိုယ်မဆဲဘဲ ကျုပ်အာဘော်တွေနဲ့ဆဲနေဒယ် ”
ရွေးဖျက်တဲ့သူ ကူလီမာလီ ကုလား အားပေးသူပဲနေမှာပေါ့
ကြည့် အခုထိ မဖျက်သေးတာ အသိသာကြီးကို ဖြစ်နေပေါ့လား
ဗျို့  ဘပု
ဆဲပုံဆဲနည်း မူပိုင်ခွင့်လုပ်သင့် ပြီဗျို့ 
ငါ့ကျတော့ (ခွားကလေး)ပြောယုံနဲ့ ဖျက်ရသတဲ့။
သြော် အနိစ္စ…ခဏခဏဝင်ဖတ်နေတာ စိတ်ကုန်ပါ့။
မင်းတို့ အစ္စလာမ် တွေ မနေတာ ကောင်းတယ် …အင်မတန်မှ ပူလောင်ပြီး ရှူပ်ထွေးတဲ့ အစွန်းရောက် ကောင်မျိုးတွေ .. အာရုံနောက်တယ် …